मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ ? ठगीनुहोला बिचार गर्नुहोस – Bannigadhi Today
मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ ? ठगीनुहोला बिचार गर्नुहोस
धनराज साउँद २०७६ फागुन ७, बुधबार ०९:२८
ह्याकरले मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा फिसिङ म्यासेज पठाएका छन् । प्रयोगकर्तालाई फिसिङ म्यासेज पठाएर उनिहरुको लगईन डिटेल ह्याकरले चोरी रहेको खबर बाहिर आएको छ ।
यसबाट हजारौं प्रयोगकर्ता प्रभावित भएका छन् । ह्याकरले मोबाइलमा पठाएको म्यासेजलाई क्लिक गर्दा स्वतः मोबाइल बैंकिङको लगईन डिटेज ह्याकरले प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अमेरिका र क्यानडामा मात्रै ४ हजारभन्दा बढी प्रभावित भइसकेका छन् ।
मोबाइल साइबर सेक्युरिटीको क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने संस्था ‘लुकआउट’ ले यस बारे जानकारी दिएको हो । संस्थाका अनुसार मोबाइलमा आएको फिसिङ म्यासेज खोल्दा सोझै एउटा अनाधिकृत वेबसाइटमा पुग्ने र उक्त वेबसाइटबाट ह्याकरले प्रयोगकर्ताको लगईन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्दछ ।
यो घटना अहिलै नेपालमा नदेखिएको भएता पनि यसबाट सतर्क रहन भने आवश्यक छ । त्यसैले मोबाइलमा आएका म्यासेजलाई क्लिक गर्नुपूर्व एक पटक अवश्य सोचौँ ।
ह्याकरले मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा फिसिङ म्यासेज पठाएका छन् । प्रयोगकर्तालाई फिसिङ म्यासेज पठाएर उनिहरुको ‘लगईन डिटेल ह्याकरले चोरी रहेको खबर बाहिर आएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ खबर, समाचार, सूचना प्रबिधि